EMMOREG : Lasa mpiasam-bazaha – MyDago.com aime Madagascar
EMMOREG : Lasa mpiasam-bazaha
Nitafa tamin’ny mpanao gazety ny lehiben’ny komandin’ny zandarmaria faritra Analamanga Rakotomahanina Florens. Nambarany tamin’izany fa nangataka ny hiarovana azy ireo masoivoho hafa eto amintsika. Tsy nisalasala ity lehiben’ny komandin’ny zandarimaria faritra Analamanga ity nilaza fa hiantoka ny fiambenana ireo masoivoho sy ny terantany vahiny miasa sy monina eto Madagsikara. Tsy ny eto amintsika ihany anefa no misy izany fa manerantany saingy tsy tokony hanaovana fanambarana miezinezina tahaka ireny. Raha ny zavamisy teto Madagasikara nandritra izay efataona mahery nitondran-dRajoelina izay dia ny fiarovana ny vahiny no ataon’ny mpitandro filaminana. Ny terantany karana sy ny sinoa ary ny frantsay manambola no saika maka ireny mpitandro ny filaminana ireny. Ireo toerana fitrandrahana isan-karazany eto amintsika izay vahiny no maro an’isa dia maka mpiaro azy avokoa. Heverin’ny vahoaka Malagasy fa fanaovana tsinontsinona azy mantsy izany fanindrahindrana vahiny tafahoatra. Iarahan’ny rehetra mahalala anefa fa ny faritra maro manerana ny Nosy dia mandry tsy lavo loha ny mponina noho ny hafitsoky ny asan-dahalo sy ny jiolahy mitam-piadiana. Tsy vitan’ny mpitandro ny filaminana Malagasy ny miaro ny ainy sy ny fananan’ny olona. Raha tsy hiresaka afa-tsy ny eto Antananarivo fotsiny isika dia saika isak’alina no ahenoina izany asan-jiolahy izany, ary toa miraviravin-tànana mihitsy ny mpitandro ny filaminana. Ny zavanisy dia lasa niditra amin’ny resaka politika ny lehiben’izy ireo ka tsy nanao ny asa fitandroana ny filaminana intsony fa zary lasa mpiaro ny mpitondra sy mpanakorontana indray. Rehefa misy mantsy ny hetsika fanehoan-kevitra ataon’ny vahoaka Malagasy izay tsy mitondra afa-tsy tànam-polo dia ny fandefasana baomba mandatsa-dranomaso no ataon’izy ireo. Manoloana izany dia lasa ratsy endrika sy tsy atokisan’ny vahoaka ka very hasina ny mpitandro ny filaminana Malagasy hany ka rehefa misy ny jiolahy tratran’ny fokonolona dia tsy maintsy iharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany. Porofon’izany ny tranga tany amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy izay nahafatesana olona 71 eo ho eo.
TSY EKEN’NY MPIANATRA HO LASA TOERAN’NY JIOLAHY NY ONIVERSITE
Auteur Solo Razafy*Publié le 8 août 2013 8 août 2013 Catégories Politique
6 réflexions sur « EMMOREG : Lasa mpiasam-bazaha »
Aoka hazava fa VOLA koa ny azy ireo no MITENY tsy misy maharatsy izany FA
INONA NO HATAHORAn’IREO MASOIVOHO???raha hitany fa tsara ny ataony maninona no
tsy maintsy mila REZIMANTA iray manontolo miambina azy???MISY RAHA AO matoa ireo MAHANA ka ireo
GIDRO no tokony mba handinika mba hiaro ny fiandrianam-pirenena fa tsy ny MPANJANAKA NO HIFAANOTOFANA,
zavatra tsy fantatr’ izy ireo dia ny VOLA AZO AVY @ FANDROBANA NY HARENTSIKA GASY IHANY ANIE NO HANARAMANY
IREO GIDRO IREO e!ny antsika ihany no mody HANIPAZANA TAOLANA dia MIDEADEAKA ERY FA ANDEVOM-BAZAHA.
Tiako be ilay sarin’izy 3 mitsamy tsy maka « l » mitsilailay eo @ bozaka mijery ny
Ireo zaza ireo no MISAINA LAVITRA noho ireto MATY HERITRERITRA ireto , dia mideaka ery nefa ny
tanindraza efa POTIKA SY RAVA dia aleo MANOMPO MPANJANAKA HAMOTIKA NY FIRENENA,asa nA
ny AIZA NY N’IREO NO MBA MISAINA SY MANDINIKA????POV CON !!!!
Raha miaramila misy saina tsy hanao an’ireny fa ny miaramila gasy anie tena mampalahelo fa « TSY MISY SAINA » e ! tena marina ny hoe : sonegaly mahazo baiko : mihinanà kakà dia mihinana ry zareo , izay no maha tsy misy saina azy
9 août 2013 à 4 h 44 min
Tokony hametra-pialàna ao @ ministerany ireo
dia manamboatra orinasa privé ê!
Izahay no miala am-paosy fandoavana ny karaman’ireo isam-bolana anie e – sa nisitaka @ fanjakana ny atao hoe « EMMOREG »!!
Ny tsy manaiky aza FORCING etsy ary
miaraka amin’ny baomba tafondro basy armes blanches
Rehefa manaiky dia amboary: slogan an-dry zareo io
Ary matoa isika mbola mihisatra eto, dia nohon’ny sasany manaiky ny hiara-dalana
Mila tadidiana isaky ny fotoana mahamety azy: i Rajoelina jiolahim-boto anie nanaiky NANAO SONIA mihintsy aza
Tsy asian’ireto GIC tsiahy-tamberina akory
plaisir 3V – efa lasa 5V izany hoy ny sasany
ho an’ireto mozambicain sy ny mentalité gena rehetra tonga mitsangatsangana sy manao plaisir eto
Nahoana moa no ny komandin’ny groupement zn eto Analamanga no mamaly ny fangatahan’ireo imasoiviho eto Amintska..
Ny fangatahana firovana na protection-n’iero imsoivoha dia tsy maintsy misy fangatahan’ny Firenena mila fiarovana ny imasoivohany mandalo eo amin’ny ministeran’ny raharaham-bahiny..
dia ny gouvernement no midinika izany amin’ireo Firenena mila fiarovana ireo…!
Azon’izy ret hatao ny mampiasa service de sécurité privée !
Précédent Article précédent : Na oviana na oviana ny fifidianana dia tsy miala ny kandidàntsika.
Suivant Article suivant : LERIVA MANAHIRANA : Mitombo andro aman’alina ny olona mankasitraka ny kandidà Lalao Ravalomanana